‘ओलीले आजको बैठक वहिष्कार गर्नु भएको होइन’ – Karnalisandesh
‘ओलीले आजको बैठक वहिष्कार गर्नु भएको होइन’
प्रकाशित मितिः २१ मंसिर २०७७, आईतवार १६:१४ December 6, 2020
काठमाडौँ। नेकपाका स्थीय किमिटी सदस्य डा. भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पार्टीको बैठकमा आउनै पर्ने धारणा राखेका छन्।
आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट बाहिरिदै गर्दा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेता रावलले भने, ‘पार्टीको विवाद अन्त्यका लागि निर्मम छलफल हुनुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष नै बैठकमा नआउने भन्ने हुन्छ? कुनैपनि हालतमा आाउनु पर्छ। आउनु हुन्छ। विवादहरुमाथि निर्मम छलफल हुनुपर्छ।’
अध्यक्ष ओली आइतबारको बैठकमा त आउनु भएन नि ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा नेता रावलले भने, ‘पत्र पठाउनु भएको थियो। भौतिक उपस्थिति हुन नसक्ने अवस्था भएर त्यो पत्र पठाउनु भएको होला। पत्रमा स्थायी कमिटिका साथीहरुलाई सम्बोधन गर्नु भएको छ। यस अर्थमा उहाँले स्थायी कमिटीको बैठक वहिष्कार गरेको होइन भन्ने बुझिन्छ।’
रावललेपार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नमिल्ने बताएका छन्। पार्टीलाई अनिर्यणको बन्दि बनाउन नमिल्ने र आगामी स्थायी कमिटी बैठकले उचित निर्णय गर्ने बताए।
उनले भने, ‘पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन। विवादलाई समाधान गर्न कति समय दिनुपर्ने हो ? विवादलाई कसरी लिने ? हाम्रो पार्टीको विवादले देशलाई फाईदा बेफाइदा के पुयाएको छ? यसबारेमा आगामी स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उचित निर्णय लिन्छ।’